UMBONO: ‘Izingane azigxile ezifundweni, ziyeke inkolo’ | isiZulu
UMBONO: ‘Izingane azigxile ezifundweni, ziyeke inkolo’
Durban – Sithole okukhulu ukunconywa isinqumo seNkantolo eNkulu yaseSouth Gauteng ngoLwesithathu sokuthi izikole zikahulumeni akumele zenzelele izinkolo ezithile ukwedlula ezinye.
Le nkantolo izwakalise ukukhathazeka ngokugqanyiswa kwenkolo eyodwa ezikoleni, nokuthi kube nenkolo eyodwa ezothathwa njengokuyiyona yona bese kuvalelwa ngaphandle ezinye.
OLUNYE UDABA: Umbono: 'Ucacile umlayezo wakhe'
Iningi labantu lizwakalise ukusijabulela lesi sinqumo, lathi sizokwenza ukuthi izingane zigxile kule nto eziyiyele ezikoleni; ukufunda.
Zifundele imibono yabafundi beZindaba24 eyehlukene lapha ngezansi:
Nolusindiso Anthea Khumalo - Isinqumo esivuthiwe ke leso. Khona zonke izingane zizolingana, zihloniphane zigxile ezifundweni zazo. Lokhu kuzokhuthaza kakhulu ukuhloniphana phakathi kwezingane ngaphandle kokucwasana ngobobulili, inkolo, ulimi, nobuzwe.
Menzi Siya Ngcobo - Kungumqondo omuhle lowo...ngoba uyabona namaSulimane ayacanasa ezimboze ubuso ezikoleni. Manje umuntu akakholwe kubo nasesontweni kuphela angezi nakho esikoleni. Mina uma ngingaya ebhange manje ngigqoke isivalabuso ngingadutshulwa ngiboshwe kodwa amaSulimane ayezemboza wona.
Bhekie Thabethe - Nezinkantolo ngathi seziyasentshenziswa manje, Bonke abakholwayo bakholwa uNkulunkulu bese kwehluka indlela abambiza ngayo, azimane zivale inkolo ezikoleni umuntu nomuntu anikwe umzuzu wokuxhumana nomdali wakhe, noma asuke ekhaya sekhulekile qha.
Kubuzakoni Mbuh Sfundiswa Nkabanhle - Mina kuyangijabulisa kakhulu. Phela vele ziningi izinkolo kwelakithi izwe kanjalo futhi zonke kumele ziqhakamjiswe kungabibikho kuchema nabathile ongungaholela ekugcindezeleni inkolo yabanye. #South Africa iyi-rainbow nation.
Ntokozo Mokoena - NeNdodana uJesu uzoke ephumule naye , ake sizwe ngabanye abaProfithi.
Smanga Zulu - Kuchenywa nenkolo yezinye izinhlanga nanokwenza, abantu bayeka inkolo yabo umsamo, bagijimela eyamaJuda, yikho ibhayibheli ngingalifundi ngigcina ngokugoqa ngalo insangu noma ngishidaba ngalo ngoba alikhulumi nami kodwa likhuluma ngamakhehla abelungu akade afa, nami akhona amakhehla akathi asafa #oNtabayezulu akukhulunywa ngani ngabo lokhu sizotshelwa ngo #Daniel.
Thulani General - Ngiyajabula mina ngesinqumo ngoba kunezinkolo ezicwaswayo siyabuka begundiswa ngisho amakhanda abantwana bethu.
Thamie Sizwe Mqwabalanda ERoyal - Cha kuyangcomeka impela lokhu, besifunza inkolo eyafika nabacindezeli la bazibamba zisemaphuphu zifakwe ushevu.